မွေးကင်းစ ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ရာမှာ အထူးသတိထားသင့်တဲ့အချက် (၅)ချက် - For her Myanmar
မွေးကင်းစ ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ရာမှာ အထူးသတိထားသင့်တဲ့အချက် (၅)ချက်
Health, Knowledge, Mom
by Aye Mon Kyaw
အရေးမကြီးဘူးထင်ပြီး သတိမထားမိတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ရတနာလေးတွေ ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်နော်…
မွေးကင်းစကလေးတွေဟာ အလွန်နုနယ်ပြီး အားနည်းနေသေးတာကြောင့် အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ရသူတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံး သားဦးမွေးဖွားတဲ့ မိခင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ မေမေပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးကို ဂရုစိုက်တဲ့အခါ နည်းမှန်လမ်းမှန် ဂရုစိုက်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ကလေးဟာ ဖျားနာမှု အနည်းဆုံးနဲ့ အကျန်းမာဆုံး ကြီးပြင်းလာနိုင်မှာပါ…
ဒါကြောင့် ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ မွေးကင်းစကလေးတွေ ပြုစုပျိူးထောင်တဲ့နေရာမှာ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။
(၁) ကလေးငယ်ကို ကတုံးတုံးပေးခြင်း
တချို့မိဘတွေဟာ ကလေးကို ဆံပင်သန်အောင် လသားအရွယ်တည်းက ခေါင်းရိတ်ပေးတတ်ကြသလို တချို့ကလေးတွေက ဆံပင်ရှည်အရမ်းမြန်တာကြောင့်လည်း ခေါင်းရိတ်တတ်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ လသားလေးတွေကို ခေါင်းရိတ်ပေးခြင်းဟာ အန္တရာယ်များပါတယ်။ကလေးရဲ့ ဦးခေါင်းခွံနဲ့ အရေပြားဟာ အတော်လေးနုနယ်သေးတာမို့ အလွယ်တကူ အနာတရဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဆံသားရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ ဦးရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့ ဆံသားအိတ်နဲ့သာ အဓိကဆိုင်ပြီး မျိုးရိုးဗီဇပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ကတုံးတုံးပေးချင်ရင်တောင် လသားအရွယ်မှာ ခေါင်းမရိတ်သင့်ဘဲ ကြီးလာမှသာ ခေါင်းရိတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
(၂) လူတကာ နမ်းရှုပ်တာကို ခွင့်ပြုထားခြင်း
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကလေးတွေ မြင်တဲ့အခါ အသည်းတွေယားပြီး ပွေ့ချီနမ်းရှုပ်တတ်ကြတာ လူတိုင်းလိုလိုပါပဲ။ မိဘတွေက ဒါကိုနားလည်လို့ မတားမြစ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို အားနာတာကြောင့်လည်း ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကလေးကိုပွေ့ချီတဲ့သူတွေမှာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့ လူတွေလည်း ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ တချို့ရောဂါတွေဟာ သွေးကနေမကူးစက်နိုင်ပေမဲ့ တချို့ရောဂါပိုးတွေဟာ ပွေ့ဖက်နမ်းရှုပ်ရုံနဲ့ ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ HSV-1 လို့ခေါ်တဲ့ Harpes Simplex Virus (ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်) ဆို ကလေးတွေကို နမ်းရှုပ်တာကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပြီး သုံးလအောက် ကလေးငယ်တွေကို သေဆုံးစေနိုင်သည်အထိ အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကလေးကို ကိုယ်မသိတဲ့သူစိမ်းတွေက နမ်းရှုပ်ခြင်းကိုတော့ ခွင့်မပြုသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ခံအားစနစ် နုနယ်တဲ့ကလေးအတွက် အန္တရာယ်များတာမို့ပါ။
Related Article >>> ကလေးငယ်ကို မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း အောင်အောင်မြင်မြင် တိုက်ကျွေးနိုင်ရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်နေသည့် လွဲမှားနေသည့် အယူအဆ (၅)ချက်
(၃) ကလေးကို ဗိုက်မှောက်ပြီး အိပ်စေခြင်း
ကလေးရဲ့ အိပ်စက်ပုံအလေ့အထဟာလည်း မိဘတွေ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ “ဗိုက်မှောက်ပြီး အိပ်ရင် ပြည့်အင့်တတ်တယ် ပြန်အန်ထွက်တတ်တယ်”လို့ မိဘအများစုက သိထားပေမဲ့ တကယ်က အဲဒီထက်အန္တရာယ်များပါတယ်။
ကလေးကို ဗိုက်မှောက်အိပ်စေတာဟာ Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ SIDS ဆိုတာ တစ်နှစ်မပြည့်ခင် ကလေးငယ်တွေ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားရတဲ့ ရောဂါပါ။
ကလေးငယ်တွေ ဗိုက်မှောက်ပြီး အိပ်တဲ့အခါ သူတို့ဟာ သူတို့ရှူထုတ်တဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုပဲ ပြန်ရှူမိပြီး အောက်စီဂျင်ရှူသွင်းမှုဟာ ပြတ်လပ်သွားတတ်ပါတယ်။ အောက်စီဂျင်မရတော့တာမို့ နုနယ်တဲ့ကလေးဟာ အသက်ရှူကြပ်ပြီး သေဆုံးသွားတတ်တာပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေ မှောက်လျက် အိပ်ပျော်နေတာတွေ့ရင် ဒီအတိုင်းလွှတ်မထားဘဲ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပုံစံပြန်ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။
(၄) Diaper (တစ်ခါသုံး ကလေးအတွင်းခံ) ကို အကြာကြီးထားပြီး ပြည့်သွားမှ လဲပေးခြင်း
တကယ်တော့ Diaper ဟာ မကြာခဏလဲလှယ်ပေးရမယ့် အရာပါ။ ဒါပေမဲ့ မိဘတွေဟာ Diaper ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာချင်တာကြောင့် Diaperကို မကြာခဏ မလဲပေးဘဲ ကလေး အီးပါချပြီးမှ ဒါမှမဟုတ် တစ်ပြင်လုံးစိုရွှဲနေမှ လဲပေးတတ်ကြပါတယ်။
ဒါဟာ မိဘအတွက်တော့ ချွေတာရာ ရောက်ပေမဲ့ နုနယ်တဲ့ကလေးအတွက်တော့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒီလို Diaperကို ခပ်ကြာကြာထားပြီး တစ်ပြင်လုံးစိုရွှဲနေမှ လဲပေးတာဟာ အရေပြားမှာ အနီကွက်တွေ ထစေနိုင်တဲ့အပြင် staph infection ဝင်သည်အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Staph infectionဆိုတာ အညစ်အကြေးမှာနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါပိုးဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်တွေအတွက် အလွန်အန္တရာယ်များပါတယ်။
ဒါကြောင့် Diaperကို ပြည့်တဲ့အထိ မစောင့်ဘဲ ခဏခဏ အသစ်လဲလှယ်ပေးသင့်ပါတယ်။
(၅) ထုထည်ကြီးတဲ့ အရုပ်ခပ်ကြီးကြီးကို ကလေးအနား ထားခြင်း
အမွှေးပွဝက်ဝံလို အရုပ်ခပ်ကြီးကြီးတွေဟာ ကလေးငယ်တွေအတွက်တော့ ဖက်အိပ်လို့ကောင်းတဲ့ အရာတွေပါ။ ဆိုပေမဲ့လည်း ဒါဟာ အန္တရာယ်တချို့ ရှိနေပြန်ပါတယ်။ တစ်နှစ်မပြည့်တဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ နုနယ်လွန်းတာမို့ SIDS ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသူတွေပါ။
ဒီလို ထုထည်ကြီးတဲ့ အရုပ်တွေကို ဖက်အိပ်တဲ့အခါ အရံမသင့်ရင် သူတို့ရဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို လာဖိမိစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ အောက်စီဂျင်ကောင်းကောင်းမရဘဲ အသက်ရှူကြပ်တာဖြစ်လာပါတယ်။ အဆိုးဆုံး အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ SIDS ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဖြစ်ခဲပေမဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အရာပါ။ နောက်ပြီး ဒီအရွယ်ဟာ ပစ္စည်းတွေကို သူ့ဟာသူ ကောင်းကောင်း မရွှေ့နိုင်သေးတဲ့အရွယ်မို့ ကလေး အသက်တစ်နှစ်မပြည့်ခင်အထိ သူအိပ်တဲ့အနားမှာ ထုထည်ကြီးတဲ့ အရုပ်ကြီးကြီးတွေမထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဒါကတော့ မိဘတွေအားလုံး သတိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပါ။ အန္တရာယ်မရှိဘူး ထင်ရတဲ့ အရာတွေက လျစ်လျူရှုမိတဲ့အခါ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အန္တရာယ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကလေးငယ်တွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါ ဒီလို ကိစ္စသေးသေးလေးကစပြီး သေချာဂရုစိုက်ကြဖို့ မှာချင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ..
Mia (For Her Myanmar)
Reference links: babbletop.com scmp.com mayoclinic.org utswmed.org
အရေးမကွီးဘူးထငျပွီး သတိမထားမိတာကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ ရတနာလေးတှေ ဒုက်ခရောကျသှားနိုငျပါတယျနျော…
မှေးကငျးစကလေးတှဟော အလှနျနုနယျပွီး အားနညျးနသေေးတာကွောငျ့ အစစအရာရာ ဂရုစိုကျရသူတှပေါ။ ဒါပမေဲ့ ပထမဆုံး သားဦးမှေးဖှားတဲ့ မိခငျပဲဖွဈဖွဈ ၊ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ မမေပေဲဖွဈဖွဈ ကလေးကို ဂရုစိုကျတဲ့အခါ နညျးမှနျလမျးမှနျ ဂရုစိုကျတတျဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါမှသာ ကလေးဟာ ဖြားနာမှု အနညျးဆုံးနဲ့ အကနျြးမာဆုံး ကွီးပွငျးလာနိုငျမှာပါ…
ဒါကွောငျ့ ခုတဈခေါကျမှာတော့ မှေးကငျးစကလေးတှေ ပွုစုပြိူးထောငျတဲ့နရောမှာ ရှောငျရှားသငျ့တဲ့ အပွုအမူတှကေို ဖျောပွလိုပါတယျ။
(၁) ကလေးငယျကို ကတုံးတုံးပေးခွငျး
တခြို့မိဘတှဟော ကလေးကို ဆံပငျသနျအောငျ လသားအရှယျတညျးက ခေါငျးရိတျပေးတတျကွသလို တခြို့ကလေးတှကေ ဆံပငျရှညျအရမျးမွနျတာကွောငျ့လညျး ခေါငျးရိတျတတျကွပါတယျ။
တကယျတော့ လသားလေးတှကေို ခေါငျးရိတျပေးခွငျးဟာ အန်တရာယျမြားပါတယျ။ကလေးရဲ့ ဦးခေါငျးခှံနဲ့ အရပွေားဟာ အတျောလေးနုနယျသေးတာမို့ အလှယျတကူ အနာတရဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
နောကျပွီး ဆံသားရဲ့ ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးမှုဟာ ဦးရပွေားအောကျမှာရှိတဲ့ ဆံသားအိတျနဲ့သာ အဓိကဆိုငျပွီး မြိုးရိုးဗီဇပျေါမှာလညျး မူတညျပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးကို ကတုံးတုံးပေးခငျြရငျတောငျ လသားအရှယျမှာ ခေါငျးမရိတျသငျ့ဘဲ ကွီးလာမှသာ ခေါငျးရိတျပေးသငျ့ပါတယျ။
(၂) လူတကာ နမျးရှုပျတာကို ခှငျ့ပွုထားခွငျး
ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ကလေးတှေ မွငျတဲ့အခါ အသညျးတှယေားပွီး ပှခြေီ့နမျးရှုပျတတျကွတာ လူတိုငျးလိုလိုပါပဲ။ မိဘတှကေ ဒါကိုနားလညျလို့ မတားမွဈတာလညျး ဖွဈနိုငျသလို အားနာတာကွောငျ့လညျး ဒီအတိုငျးလှတျထားတတျကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကလေးကိုပှခြေီ့တဲ့သူတှမှော ရောဂါပိုးကူးစကျခံထားရတဲ့ လူတှလေညျး ပါဝငျနနေိုငျပါတယျ။ တခြို့ရောဂါတှဟော သှေးကနမေကူးစကျနိုငျပမေဲ့ တခြို့ရောဂါပိုးတှဟော ပှဖေ့ကျနမျးရှုပျရုံနဲ့ ကူးစကျတတျပါတယျ။ ဥပမာ HSV-1 လို့ချေါတဲ့ Harpes Simplex Virus (ရယေုနျဗိုငျးရပျဈ) ဆို ကလေးတှကေို နမျးရှုပျတာကနတေဈဆငျ့ ကူးစကျနိုငျပွီး သုံးလအောကျ ကလေးငယျတှကေို သဆေုံးစနေိုငျသညျအထိ အန်တရာယျကွီးပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကလေးကို ကိုယျမသိတဲ့သူစိမျးတှကေ နမျးရှုပျခွငျးကိုတော့ ခှငျ့မပွုသငျ့ပါဘူး။ ကိုယျခံအားစနဈ နုနယျတဲ့ကလေးအတှကျ အန်တရာယျမြားတာမို့ပါ။
Related Article >>> ကလေးငယျကို မိခငျနို့တဈမြိုးတညျး အောငျအောငျမွငျမွငျ တိုကျကြှေးနိုငျရေးအတှကျ အဟနျ့အတားဖွဈနသေညျ့ လှဲမှားနသေညျ့ အယူအဆ (၅)ခကျြ
(၃) ကလေးကို ဗိုကျမှောကျပွီး အိပျစခွေငျး
ကလေးရဲ့ အိပျစကျပုံအလအေ့ထဟာလညျး မိဘတှေ ဂရုစိုကျသငျ့တဲ့ အရာတဈခုပါ။ “ဗိုကျမှောကျပွီး အိပျရငျ ပွညျ့အငျ့တတျတယျ ပွနျအနျထှကျတတျတယျ”လို့ မိဘအမြားစုက သိထားပမေဲ့ တကယျက အဲဒီထကျအန်တရာယျမြားပါတယျ။
ကလေးကို ဗိုကျမှောကျအိပျစတောဟာ Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) လို့ချေါတဲ့ ရောဂါ ဖွဈနိုငျခကြေို မွငျ့တကျစပေါတယျ။ SIDS ဆိုတာ တဈနှဈမပွညျ့ခငျ ကလေးငယျတှေ အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ ရုတျတရကျ သဆေုံးသှားရတဲ့ ရောဂါပါ။
ကလေးငယျတှေ ဗိုကျမှောကျပွီး အိပျတဲ့အခါ သူတို့ဟာ သူတို့ရှူထုတျတဲ့ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျကိုပဲ ပွနျရှူမိပွီး အောကျစီဂငျြရှူသှငျးမှုဟာ ပွတျလပျသှားတတျပါတယျ။ အောကျစီဂငျြမရတော့တာမို့ နုနယျတဲ့ကလေးဟာ အသကျရှူကွပျပွီး သဆေုံးသှားတတျတာပါ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးတှေ မှောကျလကျြ အိပျပြျောနတောတှရေ့ငျ ဒီအတိုငျးလှတျမထားဘဲ ခန်ဓာကိုယျလေးကို ပုံစံပွနျပွောငျးပေးဖို့လိုပါတယျ။
(၄) Diaper (တဈခါသုံး ကလေးအတှငျးခံ) ကို အကွာကွီးထားပွီး ပွညျ့သှားမှ လဲပေးခွငျး
တကယျတော့ Diaper ဟာ မကွာခဏလဲလှယျပေးရမယျ့ အရာပါ။ ဒါပမေဲ့ မိဘတှဟော Diaper ကုနျကစြရိတျကို ခြှတောခငျြတာကွောငျ့ Diaperကို မကွာခဏ မလဲပေးဘဲ ကလေး အီးပါခပြွီးမှ ဒါမှမဟုတျ တဈပွငျလုံးစိုရှဲနမှေ လဲပေးတတျကွပါတယျ။
ဒါဟာ မိဘအတှကျတော့ ခြှတောရာ ရောကျပမေဲ့ နုနယျတဲ့ကလေးအတှကျတော့ အန်တရာယျရှိပါတယျ။ ဒီလို Diaperကို ခပျကွာကွာထားပွီး တဈပွငျလုံးစိုရှဲနမှေ လဲပေးတာဟာ အရပွေားမှာ အနီကှကျတှေ ထစနေိုငျတဲ့အပွငျ staph infection ဝငျသညျအထိ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
Staph infectionဆိုတာ အညဈအကွေးမှာနတေဲ့ ဘကျတီးရီးယားကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ ရောဂါပိုးဖွဈပွီး ကလေးငယျတှအေတှကျ အလှနျအန်တရာယျမြားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Diaperကို ပွညျ့တဲ့အထိ မစောငျ့ဘဲ ခဏခဏ အသဈလဲလှယျပေးသငျ့ပါတယျ။
(၅) ထုထညျကွီးတဲ့ အရုပျခပျကွီးကွီးကို ကလေးအနား ထားခွငျး
အမှေးပှဝကျဝံလို အရုပျခပျကွီးကွီးတှဟော ကလေးငယျတှအေတှကျတော့ ဖကျအိပျလို့ကောငျးတဲ့ အရာတှပေါ။ ဆိုပမေဲ့လညျး ဒါဟာ အန်တရာယျတခြို့ ရှိနပွေနျပါတယျ။ တဈနှဈမပွညျ့တဲ့ ကလေးငယျတှဟော နုနယျလှနျးတာမို့ SIDS ဖွဈနိုငျခြေ ရှိသူတှပေါ။
ဒီလို ထုထညျကွီးတဲ့ အရုပျတှကေို ဖကျအိပျတဲ့အခါ အရံမသငျ့ရငျ သူတို့ရဲ့ အသကျရှူလမျးကွောငျးကို လာဖိမိစနေိုငျပါတယျ။ အဲဒီအခါ အောကျစီဂငျြကောငျးကောငျးမရဘဲ အသကျရှူကွပျတာဖွဈလာပါတယျ။ အဆိုးဆုံး အခွအေနမှောဆိုရငျတော့ SIDS ဖွဈပွီး သဆေုံးသှားနိုငျပါတယျ။
ဒါဟာ ဖွဈခဲပမေဲ့ ဖွဈတတျတဲ့၊ ဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့ အရာပါ။ နောကျပွီး ဒီအရှယျဟာ ပစ်စညျးတှကေို သူ့ဟာသူ ကောငျးကောငျး မရှနေို့ငျသေးတဲ့အရှယျမို့ ကလေး အသကျတဈနှဈမပွညျ့ခငျအထိ သူအိပျတဲ့အနားမှာ ထုထညျကွီးတဲ့ အရုပျကွီးကွီးတှမေထားတာ အကောငျးဆုံးပါ။
ဒါကတော့ မိဘတှအေားလုံး သတိထားသငျ့တဲ့ အခကျြလေးတှပေါ။ အန်တရာယျမရှိဘူး ထငျရတဲ့ အရာတှကေ လဈြလြူရှုမိတဲ့အခါ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ အန်တရာယျတှအေဖွဈ ပွောငျးလဲသှားတတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကလေးငယျတှကေို ပွုစုစောငျ့ရှောကျတဲ့အခါ ဒီလို ကိစ်စသေးသေးလေးကစပွီး သခြောဂရုစိုကျကွဖို့ မှာခငျြပါတယျ ယောငျးတို့ရေ..
Tags: #child, care, Health, Knowledge, mom, toddlers
မတ်မတ်နာဂီနီ (သို့မဟုတ်) Claudia Kim အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုပိုမြင့်လာအောင် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက် (၄) ချက်
Aye Mon Kyaw September 27, 2018
Stella July 5, 2019
ဂရုမထားလိုက်မိတာနဲ့ ကိုယ့်အတွက် သေမင်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ?
Aye Mon Kyaw June 14, 2019